मूलखबर,२६ असार । विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेल मंगलबार (आज) बाट शुरु हुँदैछ । पहिलो खेलमा फ्रान्स र बेल्जियम आमने सामने हुनेछन् । यो खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने १२ बजे शुरु हुने छ । फ्रान्स र बेल्जियम तेस्रो वर्षपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन लागेका हुन् । सन् २०१५ को स्टेड डी फ्रान्समा भएको खेलमा बेल्जियम ४–३ […]
विश्वकप क्वाटरफाइनलमा उरुग्वे र फ्रान्स – ब्राजिल र बेल्जियम भिड्दै
मूलखबर,२२ असार। रुसमा जारी प्रतियोगितामा पहिलो क्वाटरफाइनल खेलमा विश्वकप पूर्वविजेता राष्ट्र उरुग्वे र फ्रान्स भिड्नेछन् । यो खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः४५ बजे हुने छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत क्वाटरफाइनलका खेलहरु शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । दोस्रो खेलमा राति ११ः४५ बजे ब्राजिल र बेल्जियम आमनेसामने हुनेछन् । शनिबार राति ७ः४५ बजे तेस्रो क्वाटरफाइनल खेलमा स्वीडेन र इङ्ग्ल्यान्ड तथा […]
इङ्गल्याण्ड र कोलम्बियाबीचको खेलका तस्बिर
मूलखबर। २१ असार। विश्वकपको अन्तिम प्रिक्‍वाटरफाइनलमा भिडेका इङ्गल्याण्ड र कोलम्बियाले पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा खेले । दोस्रो हाफमा अग्रता लिएको इङ्गल्याण्डले इञ्जुरी समयमा आफूलार्इ सम्हाल्न नसक्दा खेल १-१ को बराबरीमा पुग्यो । अतिरिक्त समयमा पनि गोल गर्न नसकेका दुवै टोलीको खेल पेनाल्टीमा पुग्यो । पेनाल्टी सुटमा इङ्गल्याण्डले कोलम्बियालार्इ ४-३ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा कसको खेल कहिले कोसँग ?
मूलखबर। २०असार। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनल समिकरण पुरा भएको छ । मंगलबार राती अन्तिम प्रि–क्वार्टरफाइनलको खेल सकिएसंगै अन्तिम आठमा पुग्ने देशको टुङ्गो लागेको हो । क्वार्टरफाइनलमा फ्रान्स, उरुग्वे, रुस, क्रोएशिया, ब्राजिल, बेल्जियम, स्वीडेन र इंग्ल्याण्ड पुग्दा अन्तिम १६ बाटै घर फर्किने अभागि टोलीमा भने अर्जेन्टिना, पोर्चुगल, स्पेन, डेनमार्क, जापान, मेक्सिको, स्विजरल्याण्ड र कोलम्बिया रहेका छन् […]
मेक्सिकोलाई हराउँदै ब्राजिल क्वार्टरफाइनलमा
मूलखबर। १९ असार। बलियो टोली मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै ब्राजिल विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार भएको खेलमा ब्राजिलले मेक्सिकोलाई २–० गोल अन्तरले हराएको हो । मेक्सिको त्यही टिम हो, जसले विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलमा नै साविकको विजेता जर्मनीलाई हराएको थियो । पहिलो हाफमा मेक्सिकोले ब्राजिललाई दबाव दिएको थियो । साथै गोल गर्ने केही […]
जापानसँगको खेलमा बेल्जियमको जीत
मूलखबर। १९ असार। जापान तथा बेल्जियमबीचको रोमाञ्चक खेलमा अन्तत: बेल्जियमले ३-२ को विजय हासिल गरेको छ। खेलको मुख्य समयमा बेल्जियमले काउन्टर एट्याकमा खुकुलो जापानी डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै जापानमाथि जित हात पारेको हो। गोल खानुअघि जापानले बेल्जियमविरूद्ध कर्नर पाएको थियो र उसका प्राय: सबै खेलाडी बेल्जियमको पोस्टमा थिए। बेल्जियमले त्यसैको फाइदा उठाउँदै जापान विरूद्ध विजयी गोल […]
‘केलियन एम्बाप्पे’ जसले गरे पेलेको रेकर्ड बराबरी
मूलखबर। १७ असार। फ्रान्सेली खेलाडि केलियन एम्बाप्पेले लिजेण्ड पेलेसँगको रेकर्ड बराबरी गरेका छन् । विश्वकपको नकआउट चरणमा दुई गोल गर्ने युवा खेलाडीको रूपमा एम्बाप्पेले पेलेसँगको रेकर्ड बराबरी गरेका हुन्। पेलेले सन् १९५८ को विश्वकपमा ब्राजिलका लागि ६ गोल गरेका थिए। फ्रान्सेली खेलाडि केलियन एम्बाप्पेले सोही रेकर्डलाई बराबरी गर्ने क्रममा शनिबार राति नकआउट चरणको पहिलो खेलमा […]
मूलखबर। १७ असार। विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ । केलिन एम्बाप्पेको २ गोलको मदतमा अर्जेन्टिनालाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार भएको नकआउट चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्सले अर्जन्टिनालाई ४–३ गोल अन्तरले हराएको हो । दोस्रो हाफको सुरुमा नै गोल खाएको फ्रान्स ११ मिनेटपछि ३ गोल […]
‘नकआउट’ चरणमा कसको खेल कहिले ? प्रतिस्पर्धी को ?
मूलखबर। १५ असार। रुसमा जारी २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा शनिबारबाट नकआउट चरणको खेल सुरु हुँदैछ । ३२ देश सम्मिलित विश्वकपको समूह चरणमा ४८ खेलहरु भए । समुह चरणको खेलबाट १६ टोली नकआउट चरणमा पुग्दा १६ देश घर फर्किएका छन् । नकआउट समीकरण पूरा भएसँगै उपाधि दावेदार टोलीहरुबीचको वास्तविक भिडन्त सुरु हुँदैछ । अबका हरेक […]
ब्राजिल विजेता र स्विट्जरल्याण्ड उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा
मूलखबर। १४, असार। पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिल र स्विट्जरल्याण्ड विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । बुधबार राती भएको समुह ‘ई’ को अन्तिम खेलमा ब्राजिलले सर्वियालाई २-० गोलअन्तरले हराउँदा स्विट्जरल्याण्डले कोष्टारिकासँग २-२ गोलको बराबरी खेल्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका हुन् । समुहको अन्तिम खेलमा ब्राजिलले सर्वियालाई दुई शुन्यले हराउदै समुह विजेताका रुपमा अन्तिम १६ […]